जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
११ बैशाख २०७९, आईतवार १७:२३
घोषणापत्र पार्टीका अध्यक्षद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, नेताहरु महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिसिला यमी, प्रकाश अधिकारी र दुर्गा सोबले संयुक्त रुपमा गर्नुभएको थियो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पु¥याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई टोल–टोलसम्म जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।
जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामिण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । प्रत्येक पालिकामा ५० शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने आफूहरुको योजना रहेको बताउनुभयो । प्रत्येक घरमा विद्युतिकरण गर्नेदेखि ग्रामिण वातावरणलाई सुधारेर स्वच्छ बनाउने सम्मका योजना पार्टीको घोषणापत्रमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।